Saturday February 22, 2020 - 14:07:18 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa la kulmay xalay Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Yarey) iyo xubno ka mid ah guddiga oo booqasho ku jooga magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ku amaanay howlaha wacyigalinta bulshada ee ay u tageen deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb.
Kulankan ayaa la iskula soo qaaday doorashooyinka federalka ee la qorsheeyay in la qabto horaanta sanadka soo socda ee 2021.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax banaan Xaliimo Yarey ayaa u sheegtay madaxweyne Qoor-qoor in Galmudug ay ka mid tahay meelaha loo qorsheeyay in ay ka dhacdo doorashada.
Dhanka kale Madaxwayne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa xalay Guddoomiyaha iyo wafdigeeda casha sharaf ugu sameeyay Magaalada Dhuusamareeb.
Guddoomiyaha ayaa dhankeeda ka warbixisay hawlaha guddiga ee ku aaddan arimaha doorashada iyo sida uu guddiga ugu diyaargaroobay xaqiijinta doorasha qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya.
Madaxwaynaha iyo Madaxwayna ku-xigeenka Galmudug ayaa ballan qaaday in maamulkooda uu si wanaagsan ola shaqayn doonaan Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka kana taageeri doonaan hawl waliba uu guddiga kaga baahdo Maamulka.
Ugu danbayn Guddoomiye Xaliima Yareey ayaa Madaxda Cusub ee Galmudug mahadcelisay soo dhawaynta diirran ay u sameeyay guddiga oo maalmo kahor gaaray Magaalada Dhuusamareeb.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli sharciga doorashooyinka federalka uu saxiixay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.